Puntland oo war ka soo saartey markabkii dagaal ee Ingiriiska ee yimid Lasqorey – SBC
Puntland oo war ka soo saartey markabkii dagaal ee Ingiriiska ee yimid Lasqorey
Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Puntland oo la soo gaarsiiyey SBC ayaa si adag loogu cambeeyey markabka dagaal ee Ingiriiska ee ciidamada Somaliland horkacay ee dhawaan yimid xeebaha degmada Laasqorey.
Warsaxaafadeed ayaa u qornaa sidatan.
Dowladda Puntland Ayaa Cambaaraynaysa Dhacdadii Gardarada Ahayd ee Las Qorey
Ciidamada Dowladda Puntland ayaa xabado digniin ah ku furay askar ajnabi ah oo aan la aqoonsan maalintii 9 July 2011 ka dib markii askartaasi ay ka soo degeen xeebta Magaalada Las Qorey iyagoo wata doomo yaryar iyo baabuur gaashaaman.
Intaasi ka dib ayaa askartii ajnabiga ahayd dib ugu noqdeen badda iyagoo aan ridin wax xabado ah.
Xogta Dowladda heshay ayaa cadaysay in askartaasi ajnabiga ah ay ka soo degeen markab dagaal oo laga leeyahay Dalka Ingriiska (United Kingdom) iyadoo ay markabkaasi la socdeen saraakiil ka tirsan ciidamada Maamulka Somaliland, oo uu ka mid yahay sarkaalka ku magacaaban Taliyaha Ciidamada Badda ee Somaliland Adm. Axmed Aw Cisman.
Ciidamada Dowladda Ingriiska ayaa ka soo degay xeebta Magaalada Las Qorey iyagoo aan wax fasax ah waydiisan Dowladda Puntland. Waxaa cadaatay in Ciidamada Ingriiska ay soo qaldeen saraakiisha Somaliland, saraakiishaasi oo ka been sheegay gacan-ku-haynta Magaalada Las Qorey ee Puntland.
Dhacdadaani ayaa gudaha Las Qorey ka abuurtay jawi degaansho la’aan, iyadoo ay ciidamada Dowladda Puntland rideen xabado digniin ah.
Dowladda Puntland ayaa si adag u cambaaraynaysa talaabooyinka Maamulka Somaliland uu ku khalkhal galinayo nabada iyo xasiloonida ka jirta deegaanada Waqooyiga Somalia.
Dhacdadaani waxay ku salaysan tahay in Maamulka Somaliland uu khiyaano afkaarta Dowladaha Caalamka waana dhacdo aan la aqbali karin markii loo eego deris-wanaaga iyo wada-noolaanshaha si loo adkeeyo amniga iyo xasiloonida mandaqada.
Dowladda Puntland ayaa soo dhawaynaysa xiriirka tooska ah oo degdeg ah oo ay mas’uuliyiinta Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Ciidamada Badda ee Dalka Ingriiska la soo sameeyeen Mas’uuliyiinta Dowladda Puntland si loo cadeeyo qaabka ay arrintaani u dhacday.
Ugu danbayntii, Dowladda Puntland ayaa ugu baaqaysa Maamulka Somaliland inuu ixtiraamo deris-wanaaga iyo inuu ka waantoobo dhacdooyinka noocaan oo kale, iyadoo hore uu Maamulka Somaliland ugu soo duulay deegaano ka tirsan Puntland.